D Day လာတော့မှာ . . . ဒါတွေကြို လုပ်ထားကြပါ - Mega Wave
သဒ်ဝေ့ဗ်တုန်းကလည်း ကြိုပြင်ပါဆို လက်လုပ်လက်စားတွေက ဘယ်လိုကြိုပြင်မှာလဲ အကြောင်းပြနေတယ်။ (နေ့စဉ်ဝင်ငွေထဲကနေ မီးသွေးတထုတ်လောက်၊ ဆန်တဗူးလောက်၊ ပဲတဗူးလောက်၊ ဆေးပြားလေး တကဒ်လောက် ဖဲ့ဖဲ့ပြီး စုထားလေဗျာ)။
ကိုယ်ချင်းမစာပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ကျနော်လည်း ဝင်ငွေတပြားမှ မရှိတာ ၆လရှိပြီ။ ဒီလိုပဲ ဖြည်းဖြည်းချင်း စုရတာပဲ။အေး.. ကိုဗစ်က အရက်ပျံဂျယ်နဲ့ လက်ဆေးလို့ရတယ်၊ ကျည်ဆံမှန်ရင် ပရုပ်ဆီ လိမ်းလို့ရတာ မဟုတ်ဘူး။ စစ်ပွဲဆိုတာ ကိုဗစ်လို mask တပ်ပြီး ကာကွယ်လို့ မရဘူး။
D day စလို့ မြို့ပြတိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပြီ ဆိုရင် စစ်တပ်က ဖြတ်၎ဖြတ်ဆိုတာမျိုးတွေ လာမှာ…မီးဖြတ်မယ် ဆိုရင်..ခင်ဗျားမှာ ဖယောင်းတိုင်ရှိပြီလား?မီးသွေးမီးဖိုရှိပြီလား? မီးသွေးရှိပြီလား?
မီးခြစ် တေယာက်တလုံးရှိလား?ဓာတ်မီးရှိလား???(ရေဒီယိုရှိလား?)။အင်တာနက်ဖြတ်၊ ဖုန်းလိုင်းဖြတ်လာရင် ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲ ကြိုစဉ်းစားထားတာရှိလား?
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပါ ဖြတ်မှာ သဒ်ဝေ့ဗ်လို အလှူရှင်လည်း မလာနိုင်ဘူး။ ၃မျိုး ၁၀၀ လည်း မလာနိုင်ဘူး။ အလှူရှင်တွေလည်း သူတို့မိသားစု သူတို့ပြန်ကာကွယ်နေရမှာပဲ။
ပြီးတော့ ရေဖြတ်လိုက်ပြီဆိုပါတော့ (နယ်တွေက ရေတွင်းရေကန်ရှိသေးတယ်)။ မြို့ကြီးတွေ သောက်ရေ သုံးရေအတွက် ကြိုစဉ်းစားထားကြတာ ရှိပြီလား။
ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရရင်၊ နေမကောင်းဖြစ်ရင် သောက်ဖို့ လိမ်းဖို့ ဆေးတွေ စုဆောင်းထားပြီးပြီလား??
(သဒ်ဝေဗ့်တုန်းကလည်း လက်ထဲငွေနည်းလို့ ကြိုမဝယ်ထားကြ၊ တကယ်လည်း ဖြစ်ရော ၇၀၀ တန်ကို ၇၀၀၀ ပေးဝယ်ကြရတာ၊ ပိုတောင်ကုန်သေး)။
အကယ်၍ အရေးပေါ် အခြေအနေ ပြေးရမယ့်အနေအထား ရောက်ခဲ့သည်ရှိသော် အလွယ်တကူ မပြီးပြေးဖို့ အရေးပေါ်အိပ် ထည့်ထားပြီးပြီလား??ခေါက်ဆွဲခြောက်ကို အများကြီး မဝယ်နဲ့။ တကယ်ငတ်ရင် ဆန်တို့ ပဲတို့ကမှ ရေရှည်ခံတာ။
လောလောဆည်တောင် ကရင်ဖက်၊ ကယားဖက်က၊ ချင်းဖက်က၊ စစ်ကိုင်းဖက်က ပြေးရတဲ့ ပြည်သူတွေ တခါတရံ တောထဲက အရွက်တွေ ပြုတ်စားကြရတာပဲ။ ဒါတောင် ဖြတ်၎ဖြတ်မဟုတ်သေးဘူး။
(ကိုယ့်ရပ်ကိုယ်ရွာမှာ ဖြစ်ချင်မှလည်း ဖြစ်မှာပါ ဆိုပေမယ့် ကိုယ်အိမ်တည့်တည့်မှာ ဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်မှာပဲ။ ဘာမှ တရားသေပြောမရပါဘူး)။ တကယ်ဖြစ်လာပြီ ဆိုရင်လည်း ကိုဗစ်တုန်းကလို Mask လေးမေးချိတ်ပြီး ဈေးသွားချင်လို့ မရဘူးလေ။ ပြင်ကြ၊ စုကြ၊ ဖဲ့ဖဲ့ပြီး ဝယ်ထားကြပါ။
ပြည်သူရှုံးရင် တော်လှန်ရေးရှုံးတာပဲ။ ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို ကိုယ့်ကို လာကယ်နေရတာနဲ့ တကယ့် သူရဲကောင်း ၅ယောက် သေသွားတယ်ဆိုတဲ့ အကွက်မျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့။
မိမိကိုယ်ကိုယ် စောင့်ရှောက်နိုင်ခြင်းဟာလည်း တော်လှန်ရေးအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်ပါတယ်။
သဒျဝဗျေ့တုနျးကလညျး ကွိုပွငျပါဆို လကျလုပျလကျစားတှကေ ဘယျလိုကွိုပွငျမှာလဲ အကွောငျးပွနတေယျ။ (နစေ့ဉျဝငျငှထေဲကနေ မီးသှေးတထုတျလောကျ၊ ဆနျတဗူးလောကျ၊ ပဲတဗူးလောကျ၊ ဆေးပွားလေး တကဒျလောကျ ဖဲ့ဖဲ့ပွီး စုထားလဗြော)။
ကိုယျခငျြးမစာပွောတာမဟုတျဘူး။ ကနြျောလညျး ဝငျငှတေပွားမှ မရှိတာ ၆လရှိပွီ။ ဒီလိုပဲ ဖွညျးဖွညျးခငျြး စုရတာပဲ။အေး.. ကိုဗဈက အရကျပြံဂယျြနဲ့ လကျဆေးလို့ရတယျ၊ ကညျြဆံမှနျရငျ ပရုပျဆီ လိမျးလို့ရတာ မဟုတျဘူး။ စဈပှဲဆိုတာ ကိုဗဈလို mask တပျပွီး ကာကှယျလို့ မရဘူး။
D day စလို့ မွို့ပွတိုကျပှဲတှေ ဖွဈပွီ ဆိုရငျ စဈတပျက ဖွတျ၎ဖွတျဆိုတာမြိုးတှေ လာမှာ…မီးဖွတျမယျ ဆိုရငျ..ခငျဗြားမှာ ဖယောငျးတိုငျရှိပွီလား?မီးသှေးမီးဖိုရှိပွီလား? မီးသှေးရှိပွီလား?
မီးခွဈ တယောကျတလုံးရှိလား?ဓာတျမီးရှိလား???(ရဒေီယိုရှိလား?)။အငျတာနကျဖွတျ၊ ဖုနျးလိုငျးဖွတျလာရငျ ဘယျလိုရငျဆိုငျရမလဲ ကွိုစဉျးစားထားတာရှိလား?
လမျးပနျးဆကျသှယျရေးပါ ဖွတျမှာ သဒျဝဗျေ့လို အလှူရှငျလညျး မလာနိုငျဘူး။ ၃မြိုး ၁၀၀ လညျး မလာနိုငျဘူး။ အလှူရှငျတှလေညျး သူတို့မိသားစု သူတို့ပွနျကာကှယျနရေမှာပဲ။
ပွီးတော့ ရဖွေတျလိုကျပွီဆိုပါတော့ (နယျတှကေ ရတှေငျးရကေနျရှိသေးတယျ)။ မွို့ကွီးတှေ သောကျရေ သုံးရအေတှကျ ကွိုစဉျးစားထားကွတာ ရှိပွီလား။ထိခိုကျဒါဏျရာရရငျ၊ နမေကောငျးဖွဈရငျ သောကျဖို့ လိမျးဖို့ ဆေးတှေ စုဆောငျးထားပွီးပွီလား?? (သဒျဝဗျေ့တုနျးကလညျး လကျထဲငှနေညျးလို့ ကွိုမဝယျထားကွ၊ တကယျလညျး ဖွဈရော ၇၀၀ တနျကို ၇၀၀၀ ပေးဝယျကွရတာ၊ ပိုတောငျကုနျသေး)။
အကယျ၍ အရေးပျေါ အခွအေနေ ပွေးရမယျ့အနအေထား ရောကျခဲ့သညျရှိသျော အလှယျတကူ မပွီးပွေးဖို့ အရေးပျေါအိပျ ထညျ့ထားပွီးပွီလား??ခေါကျဆှဲခွောကျကို အမြားကွီး မဝယျနဲ့။ တကယျငတျရငျ ဆနျတို့ ပဲတို့ကမှ ရရှေညျခံတာ။ လောလောဆညျတောငျ ကရငျဖကျ၊ ကယားဖကျက၊ ခငျြးဖကျက၊ စဈကိုငျးဖကျက ပွေးရတဲ့ ပွညျသူတှေ တခါတရံ တောထဲက အရှကျတှေ ပွုတျစားကွရတာပဲ။ ဒါတောငျ ဖွတျ၎ဖွတျမဟုတျသေးဘူး။
(ကိုယျ့ရပျကိုယျရှာမှာ ဖွဈခငျြမှလညျး ဖွဈမှာပါ ဆိုပမေယျ့ ကိုယျအိမျတညျ့တညျ့မှာ ဖွဈခငျြလညျး ဖွဈမှာပဲ။ ဘာမှ တရားသပွေောမရပါဘူး)။ တကယျဖွဈလာပွီ ဆိုရငျလညျး ကိုဗဈတုနျးကလို Mask လေးမေးခြိတျပွီး ဈေးသှားခငျြလို့ မရဘူးလေ။ ပွငျကွ၊ စုကွ၊ ဖဲ့ဖဲ့ပွီး ဝယျထားကွပါ။
ပွညျသူရှုံးရငျ တျောလှနျရေးရှုံးတာပဲ။ ရုပျရှငျတှထေဲကလို ကိုယျ့ကို လာကယျနရေတာနဲ့ တကယျ့ သူရဲကောငျး ၅ယောကျ သသှေားတယျဆိုတဲ့ အကှကျမြိုး မဖွဈပါစနေဲ့။
မိမိကိုယျကိုယျ စောငျ့ရှောကျနိုငျခွငျးဟာလညျး တျောလှနျရေးအတှကျ အထောကျအကူ ဖွဈပါတယျ။
← မြစ်ရေ အတက်အကျ နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်‌ ပြောင်းလဲဖြစ်‌ပေါ်နေ‌သော မြန်မာနိုင်ငံက တွင်းကြီး
သတင်းတွေသိရဖို့ အင်တာနက်လိုင်းတွေ မရတော့ဘူးဆိုရင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ →
နိုင်ငံခြားသွားတဲ့ ယောင်္ကျားကို မျှော်ရင်း ဘဝနစ်မွန်းသွားခဲ့ရတဲ့ စိတ်ဝေဒနာရှင်မလေး
ပိဋိကတ် သုံးပုံစလုံးကို အာဂုံဆောင်နိုင်သည့် ( ၁၅ ) ပါးမြောက် အရှင်သူမြတ်တစ်ပါးထပ်မံပေါ်ထွန်းလာ